လိင်-အချစ်-ဘဝ | ဇန္နဝါရီလ 2022
စကားစစ်ထိုးပွဲသည်အချို့သော Golden Craigslist ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေ့ဆုံမှုကြော်ငြာများကိုဖြစ်စေသည်
2022 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: လိင်-အချစ်-ဘဝ
နောက်ဆုံးသမ္မတအချေအတင်ဆွေးနွေးရန်လူများသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ဆိုင်သောရှောင်တခင်တွေ့ဆုံရန်စီစဉ်ရန် Craigslist သို့လှည့်ခဲ့သည်။
16 ဆွဲဆောင်မှုရှိသော၊ ဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောလုပ်ရပ်များ
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံပေးချက်များလိုပါသလား။ ဤဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသောဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၁၆ ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။
နွေရာသီမှာ Single ဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်ကောင်းလဲ
နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျင်းပခြင်း ... ၎င်းကိုသတိရပြီးနောက်
စနေနေ့မနက်မှာငါယားယံတာနဲ့နိုးလာတယ်။ ကျွန်မရဲ့နှစ်သစ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်၊ ဆိုလိုတာကအရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေထက်ယောက်ျားလေးပိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတောင်ငါဆိုလိုချင်တယ်။ ငါစစ်ကူတွေခေါ်ပြီး GF Carlo ရောက်လာပြီးသူ့မုံငယ်လေးနဲ့အပြင်ထွက်လည်ရတာကိုပျော်တယ်၊ ပြီးတော့ပျော်ပွဲစားအတွက်မုံကိုခွဲထားတယ်လို့ပြောတယ်။ အပ္ပါ။ JD တကယ်ပဲရထားသံလမ်းတွေကရေချိုးကန်ထဲကိုမသွားဘူး၊ ရထားတွေကငါ့ဖိနပ်ကိုမစီးဘူး၊ လေထုအပင်လေးတွေကရေတိုင်ကီထဲမှာအပေါက်မကျတာသေချာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ apt ၌အမှိုက်သိမ်းအမဲလိုက်ခြင်းတစ်ခုကိုသွားပြီးနောက်နာရီအနည်းငယ်ကြာအောင်ငါစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။
Smitten မှာငါ့လိင်ဘ ၀ အကြောင်းအများကြီးပြောပြပြီးပြီ။ ဟုတ်တယ်၊ ငါ့မိသားစုကငါ့ပို့စ်တိုင်းကိုဖတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမင်းနဲ့မဝေခွဲရသေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်။ ငါနဲ့အကြာကြီးပတ်သက်ခဲ့တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစလိုက်ရအောင်။
အားလပ်ရက်ကဒ်များကိုမပို့ရန်တရားဝင်အကြောင်းပြချက် ၄ ချက်
အားလပ်ရက်ရာသီတိုင်းမှာပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာကတ်တွေပို့လေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီနှစ်မှာငါဘောလုံးကိုပစ်ချခဲ့တယ်။ ငါ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူတို့ကို Hanukkah ရှေ့ကိုရောက်အောင်ပို့ဖို့ဘဲ၊ ဒါပေမယ့်ငါဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါကဒ်တွေတောင်မဝယ်ရသေးဘူး။ အားလပ်ရက်ကဒ်တွေပို့နေလား။
လမ်းခွဲတာကိုနောင်တရရင်ဘာလုပ်ရမလဲ၊ အာရုံကြောပညာရှင်တစ် ဦး ရဲ့အဆိုအရ
Glamour ၏လိင်ကော်လံတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သူ Dr. Nan ကိုမေးပါ။ သင်လမ်းခွဲခဲ့လျှင်သင်ဘာလုပ်ရမလဲဟုအဖြေပေးသည်။
အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခြင်းမေးခွန်းများအတွက်အဖြေ ၉ ခုလူတိုင်းမေးသည်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကငါဟာဆိုးရွားတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကနေရုန်းထွက်ခဲ့ပြီးခုထိပြန်ချိန်းတွေ့ဖို့စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအားလုံးငါ့ရည်းစားကြားအချိန်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုငါလိုချင်တယ်၊ ငါဆန္ဒရှိရင်တနင်္ဂနွေတပတ်လုံးယောဂဘောင်းဘီကိုဘယ်လိုဆေးခြယ်ရမယ်ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာသင်ယူနိုင်တယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့၊ ငါ့ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရာပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်။ ပြဿနာတစ်ခုပဲရှိခဲ့တယ်၊ ငါချိန်းတွေ့တဲ့ရေကန်ထဲကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်မပစ်ချင်ခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီးမကြာခဏစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းစေသည်။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ကငါ့ကို message ပို့လိမ့်မယ်။ ထိုနေ့နှောင်းပိုင်းတွင်ငါတို့တွေ့လိမ့်မည်၊ သူသည်သူ၏ပရိုဖိုင်တွင်ဖော်ပြထားသည့်ထက် (၅) လက်မပိုတိုသည်၊ (ခ) 'ပျော်စရာအလုပ်' နှင့်အလုပ်မရှာတော့ဘူး။ (ဂ) ဆက်ဆံရေးတစ်မျိုးမျိုးရှိနေသေးသည်။ ()) လူသတ်သမားဖြစ်နိုင်သည်။ (င) အထက်ပါအချက်များအားလုံး တစ်ကိုယ်ရေလူဒါဇင်များစွာနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ငါစိတ်မဝင်စားခဲ့ဘူး။ ငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့လူမှန်တစ်ယောက်ကိုရှာချင်ခဲ့တယ်။ ငါအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့တဲ့အချိန်နဲ့အခုငါချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတာအတိအကျငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ငါအချက်အလက်တွေကိုခြေရာခံပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့တယ်၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့စကားပြောပြီး၊ အချို့သောပရိုဖိုင်းတွေကိုအောင်မြင်စေတဲ့အရာကိုရှာဖွေခဲ့တယ်။ ငါတောင်ရေးခဲ့တယ်
စုံတွဲအသစ်ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေဖို့နည်းလမ်း ၇ ချက်
မင်းအခုမှလူတစ်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေ့တာ။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်၊ သင်လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုသင်နှစ်သက်သည်၊ မင်းသူ့အနားမှာအမြဲရှိချင်သည်၊ သူအခန်းထဲလမ်းလျှောက်လျှင်သီချင်းနားထောင်သည်။ အင်း၊ မင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်နေတာကိုမင်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်နေတယ်။
Fidget Spinner Porn သည်ယခုအခါအရာတစ်ခုဖြစ်သည်မှာသိသာထင်ရှားသည်
Pornhub မှစုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များအရ Fidget spinner porn ကို ၂.၅ သန်းကျော်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်မေလတွင်ထိပ်တန်းရေပန်းစားသောအသုံးအနှုန်းဖြစ်လာသည်။
မိတ်ဆွေဖွဲ့ရန်အဘယ်သူမျှမ Brainer နည်းလမ်း? မနက် ၈ နာရီကော်ဖီဆိုင်ကိုသွား ...
ဤချစ်စရာဝတ်ဆင်နိုင်သော Vibrator သည် BDSM စတင်သူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်
ဤ wearable vibrator, Lovehoney Butterfly သည် sexy harness ရှိပြီး BDSM အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ဒါပေမယ့် orgasms တစ်ခုတည်းအတွက်ပိုရိုးရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
လူကိုအပျော်ရွှင်ဆုံးဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျသိဖို့ခက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ချိန်းတွေ့တဲ့ဆိုက် Match ကအဖွဲ့ဝင်စစ်တမ်းတွေကအချက်အလက်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အချို့ကသင်မျှော်လင့်သောအရာများဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအပျော်ဆုံးလူများမကြာခဏအပြင်ထွက်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်သူတို့၏အဟောင်းများကိုလိုက်မကြည့်ပါနှင့်။ အနည်းငယ်အံ့သြစရာကောင်းသည့်စာရင်းအင်းတစ်ခုကပေါ်လွင်သည်။ လူများသည်လိင်ဆက်ဆံရန်စောင့်ဆိုင်းလေလေပိုပျော်ရွှင်လေဖြစ်သည်။ Match ရဲ့စစ်တမ်းတွေအရပဉ္စမနေ့မှာလိင်ဆက်ဆံတဲ့သူတွေဟာပထမရက်မှာအိပ်ရာထဲလှဲတဲ့သူတွေထက် ၃၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုပျော်ရွှင်ဖို့အပျော်ဆုံးသူတွေပါ။ ဒါတင်မကတစ်နှစ်မှာတစ်ညမှာမတ်တပ်ရပ်ခြင်းကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ၁၄ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အမျိုးသားများက ၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းစေပါတယ်။ ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ? ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်သည်စိတ်ဆင်းရဲမှုအတွက်စာရွက်တစ်ခုလား။ ကျွမ်းကျင်သူများကဤရလဒ်များကိုဘာသာပြန်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည့်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုအနေနှင့်သတိပေးသည်။ လိင်ဆက်ဆံရန်စေ့စပ်ပွဲ (သို့) မင်္ဂလာဆောင်မည့်အချိန်ထိစောင့်သောသူများသည်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ခိုင်လုံသောကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်ဘာသာရေးအကြောင်းပြချက်ရှိဖွယ်ရှိသည်ဟုလိင်ကုထုံးပညာရှင် Vanessa Marin ကဆိုသည် “ ဟုတ်ပါတယ်၊ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတိုင်းလိုက်လျောညီထွေနေထိုင်ခြင်းအတွက်ကျေနပ်မှုခံစားချက်ကိုအစီရင်ခံလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကြီးကျယ်တဲ့အရာပါ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါတွေကိုလူတိုင်းဝေမျှတာမဟုတ်ဘူး
သူကသူ့ရဲ့ Ex ပုံတွေကိုသိမ်းထားရင်မင်းစိုးရိမ်သင့်သလား။ စစ်တမ်းကပြောတယ်၊ အင်း၊ ဖြစ်နိုင်တယ်။
လမ်းခွဲမှုတစ်ခုရဲ့အစမှာငါတို့ကပစ္စည်းဟောင်းတွေအားလုံးကိုပြန်ပေးဖို့နဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်တာကိုပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့အတိတ်ကဆက်ဆံရေးတွေ၊ သူ့ရဲ့အတိတ်ကခြေရာတွေကိုလုံးဝဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဤအရာသည်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုလား။
Vibrator အသုံးပြုခြင်းသည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်မင်းကို Orgasm မရနိုင်အောင်ဖြစ်စေသလား။
ချစ်ခင်ရပါသော Emily၊ ကျွန်ုပ်၏ Magic Wand vibrator ကိုကျွန်ုပ်တကယ်ချစ်ပါသည်၊ ဒါပေမယ့် vibrators များက clitoris ကိုအမှန်တကယ်ကျဆင်းစေသောကောလာဟလများကိုငါကြားဖူးပြီးယခုငါလက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏အခွင့်အလမ်းများပျက်စီးသွားမည်ကိုစိုးရိမ်နေသည်။ တကယ်တော့ငါလက်တွေကိုပြန်သုံးတဲ့အခါတိုင်းအဲဒီကိုရောက်ဖို့အရမ်းကြာတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ vibrator ကိုကျွန်ုပ်ရပ်တန့်သင့်သလား။ မင်းကလိင်ကစားစရာတွေရဲ့မှော်ဆန်တဲ့အော်ဂဇင်ကမ္ဘာထဲကိုစွန့်စားတယ်ကြားရတာငါအရမ်းပျော်တယ်။ သင့်ကိုယ်သင်စိတ်ကျေနပ်အောင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်လုပ်မလဲဆိုတာသင်ယူတာဟာပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့လိင်မှုဘ ၀ အတွက်သော့ချက်တစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့်ခုချိန်မှာတော့အော်ဂဇင်ကိုရောက်ဖို့သေချာတဲ့နည်းလမ်းကိုတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့မင်းကမင်းရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့တုန်ခါမှုမပါဘဲနဲ့အဲဒါကိုထပ်လုပ်နိုင်မှာလား။ vibrators များနှင့်အခြားလိင်ကစားစရာများ၏ကျော်ကြားမှုသည်ဆက်လက်မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှလျှပ်စစ်သူငယ်ချင်း၏အကူအညီမပါဘဲအထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ရန်ပိုခက်ခဲ (သို့မဟုတ်ပင်မဖြစ်နိုင်) ဖြစ်စေသည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့မင်းရဲ့ vibrator ကိုအနည်းဆုံးတော့ဓာတုဗေဒနဲ့မစွဲဘူး။ ၎င်းကိုသုံးခြင်းသည်မင်းကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားသောအော်ဂဇင်ကိုမစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့သူတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ရာမှာအချိန်နှင့်အားထုတ်မှုပိုလိုပုံရသည်။ Magic Wand သည်လည်းသင့်အားနေရာယူစေသည်
ငါ Goop အီးမေးလ်ကနေငါသင်ယူခဲ့တဲ့ Tantric လိင်လျှို့ဝှက်ချက် ၅ ခု (ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Gwyneth!)
ပုံမှန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်သတိရှိမှုတို့မပါသောပါဝင်မှုမှရမ္မက်ကိုပြောင်းခြင်း၊ Goop သည် ၁၈၀ ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးယခုအပတ် tantra အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆက်စကားကိုမျှဝေခဲ့သည်။ စိတ်ပညာရှင်နှင့်လိင်ပညာပေး Michaela Boehm သည်လျှို့ဝှက်ချက်အချို့ကို tantric sex အတွက်သာမကဘဲမီးပွားများကိုယေဘူယျရှင်သန်စေခြင်းနှင့်၎င်းအကြံဥာဏ်သည်အလွန်အားရစရာကောင်းတိကျမှန်ကန်သည်ဟုငါထင်သည်။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ စကြ ၀ င်ကြစို့။ ၁။ လိင်ကွဲပြားမှု (အဓိပ္ပါယ်ရှိသောလိင်ဆက်ဆံရေး) ဆက်ဆံရေးတွင်လက်တွဲဖော်သည်အမျိုးသမီးပီသသောအသုံးအနှုန်းကို ယူ၍ တစ်ယောက်ကပိုပုရိသဆန်သောအသုံးအနှုန်းနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံမှကွဲပြားမှုများကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ polarity ကိုအားကောင်းစေသည်။ ပိုစ့်များသည်ပိုဝေးလေ၊ လိင်ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းလေဖြစ်သည်။ ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတွင်လက်တွဲဖော်များသည်အလွန်တူလာကြသည်၊ တူညီသောအရာများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်လာသည်၊ တူညီသောအရာများကိုပြုလုပ်ကြသည်၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှစုံတွဲများသည်ပိုသဘောထားကွဲလွဲသည်၊ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတုဗေဒနည်းသည်။ လိင်မှုကိစ္စကမင်းမှာရှိခဲ့ဖူးတဲ့ဆက်ဆံရေးတိုင်းကိုတော်တော်ရှင်းပြတယ်မဟုတ်လား။ ၎င်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတစ်စုံတစ်ယောက် (သို့မဟုတ်သူ့ထံမှဘာကိုမျှော်မှန်းမသိဘဲ) အရာများကပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းစေနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့နည်းလမ်းကအိပ်ခန်းထဲမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုက်အခံအခန်းကဏ္တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဘဲ။ ကဲဒါကိုမင်းမပြောခင်
သင်ချိန်းတွေ့သင့်သောလူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအသက်ကိုရှာဖွေရန် Semi-Comprehensive လမ်းညွှန်
အသက်အရွယ်သည်ဂဏန်းတစ်ခုသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်လူအများစုချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်အနာဂတ်အိမ်ထောင်ဖက်ကိုရှာဖွေသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်တစ်ခုမှရပ်တန့်မသွားဘူးမဟုတ်လား။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေကရင့်ကျက်တဲ့ငွေရောင်မြေခွေးကိုပိုနှစ်သက်ကြတယ်။ အချို့အမျိုးသမီးများကသူတို့ကိုစိတ်နှလုံးနုပျိုစေရန်လူငယ်တစ် ဦး ကိုပိုနှစ်သက်သည်။ တစ်ချို့အမျိုးသမီးတွေကသူတို့တကယ်လက်ထပ်ဖို့သူတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနောက်ဆုံးမဖြစ်ချင်တာနဲ့မုဆိုးမဖြစ်မယ့်ပထမဆုံးမဖြစ်ချင်တာကိုအရမ်းတွေးတောမတွေးခဲ့ကြဘူး။ ဒီကောင်တွေကသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပိုကောင်းအောင်ချက်ချင်းလုပ်တယ်။ (ထိုစိတ်သဘောထားဆိုးသောအမျိုးသမီးသည်ကျွန်ုပ်၊ obvi ဖြစ်သည်။ ) ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးလိုက်ဖက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းရှိပါသလား။ အနည်းငယ်သောလေ့လာမှုအသစ်များနှင့်အသက်ကြီးသူများစွာတို့မှုတ်သွင်းခံလိုက်ရသည့်အရာ၊ မင်း Match.com နှစ်သက်သောအသက်အပိုင်းအခြားကိုသတ်မှတ်ခြင်း (သို့) ထွက်မသွားခြင်းကိုဆုံးဖြတ်သည့်အခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိုသောအချက်များအားလုံးကိုစာရင်းပြုစုထားခဲ့သည်။ ကောလိပ်မပြီးသေးပါဘူး။ Mariah Carey နှင့်တူ။ လူငယ်တစ် ဦး နှင့်လက်ထပ်ပါ။ ဒါမှမဟုတ်မလုပ်နဲ့! ကျွန်တော်မသိပါ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်သန်းခေါင်စာရင်းအရစုံတွဲတစ်တွဲသည်အတွင်း၌ရှိနေရန်အတွေ့ရများဆုံးဖြစ်သည်
ပိုမိုကောင်းမွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်သင့်ကိုယ်သင်မြှင့်တင်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်း ၅ ချက်
နည်းပညာသည်ကြီးမြတ်လိင်၏အစိတ်အပိုင်းသေးသေးလေးသာဖြစ်သည်။ သင်၏မူပိုင်ခွင့်ရွေ့လျားမှုများအားလုံးထက်ပိုအရေးကြီးသည်မှာသင်အိပ်ခန်းထဲမ ၀ င်မီဖြစ်ပျက်သောပြင်ဆင်မှုဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများ။ ငါစာပို့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာတဲ့အကြံပြုချက်တွေရှိတယ်။ နေရောင်ခြည်ထွန်းလင်းသည်နှင့်အညီသေချာသိပါ၊ သင်၏အိမ်မက်မက်သူသည်သင်နှင့်မတူဘဲစာတိုပို့ခြင်းကိုသုံးသည်။ သူကမင်းကိုဆက်သွယ်ရေးရဲ့အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်စာပို့မှာမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်စာတိုပေးပို့ခြင်းသည်သတင်းအချက်အလက်အမြန်ရရှိရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာမှမပိုဘူး၊ ဘာမှမပိုဘူး။ မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကငါ့ကိုတိုက်လိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းတကယ်ဂရုစိုက်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုမှာရင်းနှီးဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အထိမင်းရဲ့ဘာသာစကားနဲ့မင်းကိုစာပို့မယ့်လူတစ်ယောက်ကိုမင်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့အရေးမစိုက်တဲ့အခါဆက်သွယ်ရေးရဲ့အဓိကနည်းလမ်းအဖြစ်စာပို့ခြင်းကိုသုံးပါတယ်။ သူတို့ကရှေ့ကိုဂရုမစိုက်ရင်အဲဒါကပိုကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်မင်းရဲ့တစ်ခုတည်းသောအလုပ်ကမင်းကသူ့စိတ်ကူးအိပ်မက်လို့ထင်တဲ့သူကိုရှာပြီးတော့သူကမင်းပဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပါ။ မင်းကသူ့အိပ်မက်ထဲကအမျိုးသမီးလို့ထင်တဲ့ဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ယောက်ျားလေးကိုတွေ့တာနဲ့မင်းအေးဆေးကစားပါလို့ငါမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ အလေးအနက်ထား၊ စိတ်အေးအေးထားပါ။ 'ငါစိတ်ခံစားမှုကိုရရှိနိုင်ဖို့အရမ်းပူတယ်' မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမင်းကိုချစ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းအလုပ်လုပ်ရမယ်၊ sweetie pie၊ ပိုလုပ်ရမယ်။ ဒါတွေကတော့လမ်းညွှန်လိုက်တာပါဘဲ
၂၀၁၆ နွေ ဦး ပြေးလမ်းများမှမျှော်လင့်မထားသောနှစ်သစ်ကူးအကြိုဖိနပ်စိတ်ကူးများ ၉
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာလုပ်စရာ၊ မလုပ်ရ၊ မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုမာန်မာနနဲ့မလိုမုန်းထားမှုတွေကနေသုံးနိုင်ပါတယ်
Hunger Games မှလှပသောကော်ဇောအနီရောင်အနီရောင်ဝတ်စုံများအားလုံးကိုကြည့်ပါ
Taraji P. Henson, Gina Rodriguez, နှင့် Emma Roberts ကာဗာတို့၏ New Power Trio နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
madewell sightseer ဇာဖိနပ်ခြေနင်း